🥇 ▷ Apple waxay soo bandhigtaa taxanaha Apple Watch 5 oo leh howlo cusub iyo dareemayaal ✅
Apple waxay soo bandhigtaa taxanaha Apple Watch 5 oo leh howlo cusub iyo dareemayaal
Mid ka mid ah kooxaha aadka loo jecel yahay ee Apple Waa la dayactiray. Taxanaha “Apple Watch Series 5” wuxuu la yimid howlo cusub iyo dareemayaal, si loo sii wado hagaajinta khibradda isticmaaleyaasheeda. Koox u horseeday inay noqdaan aalad muhiim u ah kuwa jecel isboortiga iyo caafimaadka.
Shaashadda had iyo jeer waa mid socota, kombuyuutaro isku dhafan, wicitaan deg deg ah oo caalami ah, dhameystir cusub iyo watchOS 6 ayaa ah tiirarka kooxdaan cusub Sure, waxay noqon doontaa sababta loo beddelo moodooyinka hore.
“Apple Watch waxay ku yeelatay saameyn aad u wanaagsan nolosha macaamiisha, sidaa darteed waan ku faraxsanahay inaan kuu soo bandhigno xitaa astaamo dheeri ah oo la socda” Apple Watch Series 5 iyo watchOS 6 ». ku xirnaashada dadka iyo macluumaadka ay aad u daneynayaan badanaa way ka fududaan doonaan sidii hore.
JEFF WILLIAMS, MADAXWEYNAHA FURSADAHA.
Wararka ka imanaya taxanaha Apple Watch 5
Had iyo jeer shaashad firfircoon
The Taxanaha Apple Watch 5 Waxay ku dartay shaashad cusub oo tuseysa waqti iyo macluumaad kale oo muhiim ah marwalba. Ha iloobin shaashadda la jebiyey markii aad curyaamiyey, laakiin hadda iyo Thanks to qalabka loo isticmaalay soo saarida gudiga cusub, koontaroolkeeda soosaarka alaabada aadka u hooseeya, koronto isku dhafan oo maareeya tamarta korantada iyo qalabka cusub ee iftiinka ku shaqeeya. Shaashadda Apple Watch Series 5 marwalba way joogi doontaa batterigaaguna wuxuu sii wadi doonaa inuu bixiyo 18 u dhigma batari maalinta oo dhan.
The Apple Watch cusub waxaa ku jira kombuyuutar isku-dhafan kaas oo lagu hagaajinayo howlihiisa goobta U oggolaanaysa isticmaaleyaasheeda inay ogaadaan jihada ay raadinayaan. Shaqadan cusub waxay noo oggolaaneysaa inaan ogaano cinwaan ahaan, u janjeero, jiilaalka, dhererka iyo dhererka halka aan joogno. Xaqiiqdii, waxaan ku dari karnaa mid ka mid ah seddexda dhibaatooyinka ee Compass wejiga saacadda si aan uga eegno si muuqata.
Wicitaannada Degdegga ah ee Caalamiga ah
Dhammaanteen waan ogsoon nahay howsha S.O.S oo ay ku jiraan Apple Watch iyo iPhone. Nidaam, haddii loo baahdo, u wac adeegyada gurmadka deg-degga ah ayaga oo u diraya meeshayaga. Ilaa hadda, si loo isticmaalo nidaamkan waxay muhiim u ahayd in la helo khadka macluumaadka ee xiriirka la leh si wicitaan loo sameeyo. Laakiin barnaamijka “Apple Watch Series 5” uma sii baahnaan doono, maadaama Nidaamkan ayaa la adeegsan karaa iyada oo aan loo eegin waddanka uu aaladda markii horeba laga iibsaday ama haddii qorshaha xogtu uu shaqeynayay iyo in kale.
Qiimaha iyo helitaanka taxanaha Apple Watch 5
Apple Watch 5 waxaa lagu heli karaa laba sanduuq oo cabbir ah (40 ama 44 mm) bir ama aluminium laga soo qaado 449 yuuro oo aan lahayn xog mobiil ama 549 yuuro oo leh GPS iyo xog. Labada qaabba waxay ku iibin doonaan dukaamada bisha Sebtember 20, laakiin durba diyaar ayey u yihiin boos celis websaydhka Apple.
Sidoo kale kuwa raadinaya wax kale oo dheeraad ah, Apple Watch waxay leedahay daabacadihii Nike + laga bilaabo € 449, Hambalyo ee 1,349 euro, Birta ee € 849 Y nooca gaarka ah ee dhoobada ee 1,399 euro.